10 Sababood oo Ganacsatada Yaryar u iska indho tiri karin Baraha Bulshada | Martech Zone
Talaado, Janaayo 28, 2014 Isniin, Janaayo 27, 2014 Douglas Karr
Jason Squires wuxuu soo saaray liis feker ah 10 Sababood oo Ganacsatada Yaryar aysan u indha indheyn karin Baraha Bulshada. Waxay siisaa dhammaan caddeynta wixii ganacsi yar ee ay u baahan yihiin haddii ay weli xiiseynayaan inay quustaan ​​iyo in kale. Waxaan ku soo koobayaa dhammaantood laba sababood oo gaar ah, in kastoo:
Saaxiibbadaa, rajadaada iyo macaamiishaadu hadda way joogaan. Ma joogtaa marka ay caawimaad u baahdaan? Ma joogtaa halkaas oo aad kala talineyso iibkooda soo socda?
Tartankaagu ma jiro! Dad badan ayaa tan marmarsiiyo uga dhigta… ma jiro qof ka tirsan warshadeenna oo ku jira baraha bulshada. Wow… maxay fursad qaali ah kuu tahay inaad calankaaga ku dhex beerto dhulka! Maxaad sugeysaa Tartankaagu inuu bilaabmayo?
Soo-bandhigid, aqoonsi, daacadnimo… kuwan dhammaantood waa waxyaabaha kiciya ee looga adkaado arrimaha aaminka. Shakhsiyaddaada iyo dadkaaga oo aad hor dhigto shirkaddaada halkii aad ku qarin lahayd astaantaada ayaa kaa dhigeysa mid nugul. Taasi waxay u egtahay inay xun tahay, laakiin maahan. Dadku waxay rabaan inay dadka la shaqeeyaan - ma ahan astaamo!
haye! fikrad aad u fiican ayaan ka helay bartaada internetka cz Waxaan ka wadaa ganacsi yar waxaanan u maleynayaa inaan ku hormariyo internetka. Hadda waxaan hubaal ku sameyn doonaa caawinta qoraalkaaga. 🙂
Febraayo 1, 2014 saacadu markay tahay 3: 34 AM
Waxaan raacnay dhamaan Shuruucda Warbaahinta Bulshada ee Ganacsigeena Yaryari waxna uma shaqeyn sidii ay u saadaalisay Social Media Gurus - Tani waa wada buunbuunin iyo NOT100% dammaanad guul ah. Waxaan lahayn MADAX QARAN, MALAHAN INTA LAGU QAADO SALES-ka iyo wax aan isku daynay oo ganacsiga horay u sii waday. Laakiin waxaan isticmaalnay lacag badan oo suuq geyn ah. Fadlan ha noo sheegin inaanu wax walba khalad ku wada samaynay maxaa yeelay maynaan samayn - Facebook, Twitter, Pinterest, Blog iyo Website… Waxaan nahay Xirfadlayaal Suuqgeyn ah waxaanan isku daynay dhammaan Gurusyada; talo… Dhamaan buun buuninteeda.
Feb 2, 2014 markay ahayd 6:09 PM
@anthonysmithchaigneau: disqus natiijooyinkaagu MA ahan wax aan caadi ahayn waligayna ma dhihi doono "qalad ayaad sameysay". Haddii aad sii wado aqrinta balooggeena, waxaad arki doontaa meesha aan gadaal uga riixnay 'gurus'. Waa sababta aan ugu talineyno diiradda in badan kanaal halkii laga ahaan lahaa mid bulsheed. Warshadaha qaarkood wali ma jiraan, bulshooyinka qaarkood ma jiraan, mararka qaarkoodna si fudud uma ahan dhaqan ku habboon ganacsiga. Waxaan u maleynayaa inay had iyo jeer tahay wax lagu qoslo sida la-taliyayaasha warbaahinta bulshada ay u helaan natiijooyin fiican like waa sida qareen difaacaya qareenada 🙂 Dabcan 'gurusku' waxay ku helayaan natiijooyin fiican… taasi waa waxa ay nolol ku sameynayaan. Dhammaan warshaduhu isku mid ma aha, in kastoo!
Waxaan sidoo kale aaminsanahay inay tahay sababta, doorashadii suuqgeynta ee 2013, suuqleydu ay dib ugu soo jeesteen emaylka suuq geynta istiraatiijiyad aasaasi ah. Waxaan jecel nahay warbaahinta bulshada inaan u adeegsanno 'echo' iyo dhiirrigelinta waxyaabahayaga - laakiin waxaan weli ku tiirsan nahay kanaalada kale sida raadinta, emaylka, xayeysiinta iyo xitaa dadaallada dibadda. Waad ku mahadsan tahay ka mid noqoshada wadahadalka!
Jawaab wanaagsan oo deggan oo ka timid Douglas kuna socota Anthony.
Oktoobar 14, 2016 at 6:19 PM
Qaar ka mid ah sababaha wanaagsan ee loogu socdo warbaahinta bulshada! Way igu adkaatay inaan helo nuxur aan ku dhajiyo illaa saaxiibkay ii sheegay inaan isticmaalo Capzool, waxay leeyihiin qoraallo aan la aqbali karin oo ku saabsan labada meheradood ee niche, wax badanna way kordhin doonaan markaan codsado. Waxa kale oo jira jadwal talooyin ah oo i siiya fariimo maalin kasta sanadka. Waxaan kugula talinayaa qof walba inuu isticmaalo!